re-Subscription PHOTORECOVERY®ဆော့ဝဲများအတွက် [PC ကို] | Data Recovery
re-Subscription PHOTORECOVERY®ဆော့ဝဲများအတွက် [PC ကို]
နေအိမ် → re-Subscription PHOTORECOVERY®ဆော့ဝဲများအတွက် [PC ကို]
PHOTORECOVERY® PRO အထူးကမ်းလှမ်းချက်!
PHOTORECOVERY® PRO PHOTORECOVERY ၏ကြီးမြတ်အင်္ဂါရပ်များအားလုံးရှိပါတယ်®, ဒါပေမယ့်လည်းစွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်မီဒီယာပြန်လည်ထူထောင်ရေးများအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာဆရာဝန်လည်းပါဝင်သည်. သငျသညျလျင်မြန်စွာ Backup ကိုတတ်နိုင်သမျှ, သုတ်, format, ကာရန်သူတို့အားအသုံးပြုသောဒစ်ဂျစ်တယ် memory card Restore “အသစ်ကဲ့သို့” စွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်အထိ. သင့်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ကတ်များကိုအစားထိုးသည့်အခါသင်သိပါလိမ့်မယ် – ဒါဟာသိပ်နောက်ကျမယ့်ရှေ့တော်၌ငါသိ၏!
သငျသညျ PHOTORECOVERY PRO သင်စာရင်းသက်တမ်းတိုးဖို့နိုင်ပါတယ်® လက်လီစျေးနှုန်း၏ထက်ဝက်မှာ! အဘို့အသက်တမ်းတိုးဖို့အထက်ဝယ်အခုတော့ button ကိုကလစ်နှိပ်ပါ $30!
PHOTORECOVERY သင့်ရဲ့တစ်နှစ် subscription ကိုသက်တမ်းတိုးပေးဖို့ယ်ယူရန်အခုတော့ button ကို click နှိပ်ပေးပါ® အဘို့ $20!
သက်တမ်းတိုးရန်, သင်သက်တမ်းတိုးဝယ်ယူဖြည့်ပြီးမှသင်ဆော့ဖ်ဝဲဗားရှင်းအသစ် download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. ထိုအခါ, ဗားရှင်းအသစ်ကို install version အဟောင်းများအားအစားထိုးသင့်ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းကနေအသစ်က serial number ကို အသုံးပြု. activate လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်.